Polisim-pirenena - Niavaka ny fankalazana ny faha 58 taona
Mankalaza ny faha 58 taonany ny Polisim-pirenena. Fanamarihana ao anaty « jubilé » no entina mankalaza ny tsingerintaona.
Fankalazana ny faha 58 taonan’ny Polisim-pirenena
Hetsika maro no nomanina mandritra ny fankalazana ny faha 58 taonan’ny Polisim-pirenena nanomboka ny Sabotsy faha 28 septambra teo. Notanterahina omaly kosa ny ivon’ny fankalazana. Na dia teo aza ny fankalazana dia tsy maintsy jerena koa ny zava-misy eo Firenena.
Nisy ny hazakazaka zay nandraisan’ny polisy 1000 hazakazaka teto Antanananarivo, ny « cross de défi ». Samy manana ny fankalazana ny azy avokoa ny any Faritra tsirairay ny Asabotsy faha 28 septambra teo.
Mikaon-doha hatrany ny Polisim-pirenena hanatsarana ny fandriampahalemana. cc: Toria Dimbiniaina
Raha ho an’ny omaly Alatsinainy faha 30 septambra kosa indray dia nisy ny fanomezan-drà maimaim-poana. Manodidina ny 500 teo ireo polisy nanome ra maimaim-poana teny amin’ny HJRA Anosy. Polisy avy ao amin’ny ministeran’ny Filaminam-bahoaka,­ ny « Brigade Criminelle », ny Polisy eny anivon’ny Boriboritany, ny FIP ary ny sekoly teny ivato no nanome rà.
Laharam-pahamehana ny fanamafisana ny fandriampahalemana
Ankoatra izay dia hisy ny fitokanana kaomisaria, ny fametrahana talem-paritra miisa 5 any Fianarantsoa sy Talem-paritra miisa 4 ao Toliara. Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha 58 taonan’ny Polisim-pirenena sy fanohizana hatrany ny asa sahanin’ny Polisim-pirenena. Laharam-pahamehana ho an’ny Polisim-pirenena raha teo ny fanamafisana ny ny fandriam-pahalemana.­ Noho izany dia miaraka hatrany ny hetsika fanamarihana ny faha 58 taona sy ny asa fitandroana filaminana.